Ogaden News Agency (ONA) – Shir Loo Dhanyahay oo Faracyada Joka iyo masuulinta OYSU/KA ay ku Go’aansadeen Qodobo Muhiim ah
Posted by ONA Admin	/ November 18, 2014
Waxaa shalay khadka isgaadhsiinta kulan aad u qiimo badan ku yeeshay dhamaanta maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya Ee Koonfur Afrika (JOKA) iyo Masuuliyiinta Ururka OYSU ee Koonfur Afrika.
Shirka oo uu daadihinayay Gudoomiyaha Jaaliyada ayaa waxaa soo xaadiray Maamulka Sare ee Jaaliyada, Maamulada faracyada Iyo Maamulada OYSU K/Afrika. Shirkan oo aalaaba dhaca bisha 17 keeda ayaa kamid ahaa shirarkiii caadiga ahaa ee ay maamuladu ku kulmi jireen. Hase yeeshee shirkan ayaa kaga duwanaa kuwii hore qorshayaal waawayn oo hawl wadeeenka halganku ay ku go,aansadeen in ay ka libkeenaan.
Furitaankii shirka ka dib ayaa laga dhagaystay waxqabadka hogaamada, Farayada iyo OYSU K/Afrika, waxaana qiimayn lagu sameeyay waxyaabihi qabsoomay halka qorshayaal cusub la’isla astaystay in la fuliyo inta ka sokaysa shirka xiga bisha soo socota ee 12 aad.
Shirkan oo kusoo hagaagay 2 maalmood kadib Xuska Xasuuqii Xanuunka badnaa ee ciidamada nacabku ka gaysteen magaalada Q/Dahare 2005kii ayaa shirku canbaaryn dusha uga tuuray xukuumada Tigreega iyo gacanyaraha dhiigga kunaaxa ah ee ka qayb qaata gaboodfalada lagula kaco shacabka birmagaydada ah ee dulmiga lagu haysto.
Sidoo kale wuxuu shirku faray dhamaan shacabka birta ah ee Soomaalida Ogaadeeniya in aysan hilmaamin dhacdooyinka xanuunka leh ee soo maray iyo kuwa hada taagan, isla markaana ay garwaaqsadaan in aysan ka baxaynin inta dhulkaada gumaysigu haysto, loona baahanyahay in caqabadan lagaga gudbo Midnimo Mintid Isku tashi oo ah midii aan 30 sano kusoo gaadhnay meesha aan maanta marayno.
Ugu danbayntii shirku wuxuu bogaadiyay Saxaafada Ogaadeeniya noockasta oy tahay iyo dadka Soomaaliyeed ee damiirkoodu noolyahay sida lama ilaawaanka ah ee hiil iyo hooba ay ula garabtaagan yihiin walaalahooda dulman waxaana inta kale ugu baaqaynaa in ay ka ilaaliyaan hagardaamo loo gaysto halganaka loogu jiro Xoraynta Ogaadeeniya.